Qeybta:General3 min akhris
Tonya Allen waa madaxweynaha hay'adda McKnight Foundation, oo ah aasaas qoys oo reer Minnesota ah oo doonaya in ay horumariyaan mustaqbal cadaalad, hal abuur leh, iyo tiro badan oo dadka iyo meeraha ay ku barwaaqoobaan. McKnight wuxuu sannad walba bixiyaa qiyaastii $100 milyan oo lagu taageerayo xalalka cimilada ee Midwest, sinnaan iyo loo dhan yahay Minnesota, farshaxanka, neerfaha, iyo cilmi baarista dalagyada caalamiga ah. Allen wuxuu madax ka yahay dhammaan haweenka, aqlabiyadda dadka-midabka kooxda hoggaanka sare iyo shaqaale kala duwan oo qiyaastii ah 50.
Wakiilka Isbedelka Dynamic. Allen wuxuu horseeday samafal wanaag, ganacsi, dowlad, iyo iskaashi bulsheed oo kobciya fikirka cusub, tijaabiya habab cusub, iyo hormarinta siyaasada guud. Intii ay ku jirtey 25 sano, waxay ahayd buundo-dhise iyo dibloomaasi xagga bulshada ah. Allen waxaa lagu amaanay natiijooyinkeeda ay horseeday iyo habka wada shaqeynta aadka u saameynta badan ay Taariikhda Philanthropy (Shan Hal-abuurayaal aan faa'iido doon ahayn oo ay daawadaan), Shabakadda Maalgeliyaasha (Abaalmarinta Nicholas P. Bollman), Wararka Detroit (Michiganian-ka sanadka), iyo Ganacsiga Crain ee Detroit (Gabadha warfaafinta sanadka iyo 100ka dumarka ugu saamaynta badan).
Hogaamiyaha Philanthropic. Allen wuxuu gudoomiye ka yahay Golaha Aasaaska, wuxuu wada-gudoomiye ka yahay Isbahaysiga Fulinta ee Wiilasha iyo Ragga Midabka leh, wuxuuna ka soo shaqeeyey guddiyo badan oo samafal ah. Kahor ku biirida McKnight ee 2021, Allen wuxuu u soo noqday madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee 'The Skillman Foundation', aasaas gaar ah oo Detroit ah oo loogu talagalay hagaajinta dugsiyada, xaafadaha, iyo ladnaanta qoysaska ku nool Koonfur-bari Michigan, iyo sarkaal barnaamijka CS Mott iyo aasaaska Thompson-McCully. Iyadu waa wada-aasaase iyo naqshadeeye Sanduuqa Carruurta ee Detroit — oo ah hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo isu geynaysa oo maalgelinaysa raasumaal si loo horumariyo dugsiyada — waana aasaasaha iyo agaasimihii hore ee Detroit Parent Network.
Sinaanta La Kaxeeyo. Horyaalka kala duwanaanta, ka mid noqoshada, iyo ku dhaqanka sinnaanta, Allen waxaa wada hamigeeda cadaalada. Waxay la shaqeysay la-hawlgalayaal fara badan oo kala duwan si loo horumariyo shakhsiyaadka, hay'adaha, qaybaha, iyo istiraatiijiyadda sinnaanta ee bulshada. Dadaallada Allen ee ku aaddan in hay'adaha laga dhigo kuwo caddaalad ku dhisan ayaa loo tixgeliyaa sida ugu fiican fasalka, waxayna iyadu hoggaamiye qaran u tahay waaxda samafalka ee mowduucan. Allen wuxuu xubin ka yahay Guddiga La-talinta Ka-mid-ahaanshaha General Motors, agaasime madax-bannaan oo ka tirsan Sun Communities, iyo lataliye shirkado badan oo la xiriira dadaallada ka mid noqoshada. Corp! Magazine ku maamuusay Allen Abaal Marinta Salaanta Kala-duwanaanta.
Iskaashatada Waaxda Dadweynaha. Awoodda iyo awooda la-talinta ee Allen waxay ku fidsan tahay waaxda dowladda. Waxay si wax ku ool ah ula shaqeysaa dhammaan xisbiyada siyaasadeed. Shaqadeeda waxaa kamid ahaa gudoomiye kuxigeenka Gov. Gretchen Whitmer ee ku noqoshada gudiga iskuulka intii lagu gudajiray fiditaanka Covid-19; lataliyihii hore ee gobolka Rick Snyder oo ku saabsan dib u habeynta waxbarashada; wada-shaqeynta dib-u-dhiska Dugsiyada Dadweynaha ee Detroit; la talinta Madaxweynihii hore Barack Obama ee Isbahaysiga ilaaliyaha ee Walaalkay; martigelinta booqashooyinka madaxweynaha iyo xisbiga Jamhuuriga ee dimuqraadiga iyo Jamhuuriga; isla markaana si guul leh loo horumariyo siyaasadda labada xisbi.
Abaabulaha Bulshada. Allen waxay bilawday shaqadeeda iyadoo lashaqaynaysa dadka deegaanka, waalidiinta, iyo hogaamiyeyaasha diinta ee xaafadaha, hab wali udub dhexaad u ah anshaxdeeda. Hoggaankeedu wuxuu ku qotomaa laba mabda 'oo ah: Midkeenna ma ka caqli badan yahay kulligeen' iyo 'awooddu waa dad abaabulan iyo lacag abaabulan.' Waxay aad u jeceshahay inay isu keento xulafooyin aan macquul ahayn oo wadajira - mudnaanta codadka iyo fikradaha bulshada ee xarunta - iyo wada-abuurka xalalka ay dadka iyo meeraha ku horumaraan.
Hogaamiyaha Fikirka. Allen waa qof sifiican loo tixgaliyo oo fikirka ka dhiibta, waa qoraa, wax ku biiriyaha warbaahinta, iyo lataliye. Waxay u adeegtay sidii aqoonyahan-guri-deganeed ee Dugsiga Clinton ee Adeegga Dadweynaha, halkaas oo ay qalinka ku duugtay Jacaylka Xagjirka ah: Mas'uuliyadaha Jinsiyadaha Bulshada ee Awood siinta Isbedelka Bulshada, Dhiirrigelinta Sinnaanta, iyo Isbeddelka Naxdinta leh.
Ku Hawlan Baro. Allen rabitaankiisa inuu wax ka barto dadka kale waa mid aan la dabooli karin. Waxay haysataa shahaadada mastarka ee caafimaadka bulshada iyo shaqada bulshada iyo bachelor-ka ee cilmiga bulshada, mid kasta oo ka socota Jaamacadda Michigan – Ann Arbor. Waxay xubin ka tahay guddiga ururka ardayda ka qalin jabisay jaamacadda waxayna heshay Abaalmarinta Qalinjabiyeyaasha Labada Bilood ee saamaynteeda iyo tabarucaadkeeda. Waxay guddoomiye ka tahay guddiga Jaamacadda Oakland. Intaa waxaa sii dheer, Allen wuxuu bartay arrimaha adduunka iyo dawladaha isagoo ah Jarmal Marshall Fund Transatlantic Fellow iyo Harvard Kennedy School. Waxay kasbatay wehelnimo machadka Aspen, Machadka Ganacsiga ee Mareykanka, iyo BMe Community.
Minnesota cusub. Allen waa nin reer Minnesota ah oo xamaasad badan. Waxay ku jiidan tahay qiimaha North Star State, dadka, iyo ballanqaadka samafalka. Waxay u heellan tahay qoyskeeda, oo ay ku jiraan ninkeeda, Louis, iyo saddexdooda gabdhood, Phylicia, Brianna, iyo Alanna.